Global Voices teny Malagasy » Bibikelin’ny Telegram Mamoaka Ny Resaka Anatiny Nifanaovan’ny Mpiasan’ny Fahitalavitra Rosiana Iray Any Amin’ny Mpisera Iray Hafa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Jolay 2016 8:05 GMT 1	 · Mpanoratra Tetyana Lokot, Kevin Rothrock Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Akon'ny RuNet
Telegram miatrika olana bibikely hafahafa. Sary avy amin'i Kevin Rothrock.
Nitatitra ny mpisera Telegrama Rosiana iray fa naharay filazana hafahafa avy amin'ny karajian'ny Telegram izay tsy maha-mpikambana azy akory. Nahafahan'ilay mpiserasera manjohy vondrona karajia anatiny iray eo amin'ny ekipa media sosialin'ny fantsona TV Rain Rosiana ilay hafatra filazana tsy niriana, ankoatra ny zavatra hafa. Ahoana ary inona no antony nahatonga izany? Ary inona no lazain'izany momba ny rafi-pifandraisana voalaza fa voaaro ao amin'ny Telegram?
Nitatitra ny TJournal fa nividy iPhone tamin'ny olom-pantatra ilay mpisera Telegrama Anna Gorbacheva tamin'ny Novambra 2015. Satria tsy nataon'izy ireo tamin'ny endriny nanamboaran'ny orinasa azy nivoaka ozinina ny finday, fa nivoaka tamin'ireo kaontiny media sosialy sy ny iCloud ny tompony teo aloha. Nandeha tsara ilay finday vaovao tamin'ny voalohany.
Saingy iray volana tatỳ aoriana, nanomboka nipoitra tamin'ny efijeriny ny filazana hafahafa:
Ankavia: Pikantsary avy amin'i iPhone an'i Anna mampiseho ny filazana avy amin'ny karajia TV Rain SMM ao amin'ny efijeriny tsy misokatra. Ankavanana: Pikantsarin'ny fikasany tsy nahomby saika hamaly ny hafatra. Sary tao amin'ny tjournal.ru.
Niahiahy izy sao mihaino tsy nahy ny resaka manokana ataon'ny olona, nanoratra tany amin'ny telegram izy. Hoy izy tamin'ny TJournal:
Tamin'ny volana Janoary, nahita hafatra teo amin'ny efijeriko mihidy aho, izay resaka mbola tsy nandraisako anjara akory. Gaga aho ary nanokatra ny Telegramako. Tsy mety miseho ny karajia, na dia tsy mitsahatra tonga foana aza ireo filazana. Ka nanoratra tany amin'ny Telegram aho, ary nandefa pikantsary sasany.
Tsy namaly ny Telegram, ka nofafan'i Anna daholo fotsiny ny telegram manontolo. Saingy nila ny fandefasan-kafatra (messenger) ho an'ny asany ao amin'ny sampan-draharaha momba ny dokambarotra izy vao haingana, ka nanokatra izany indray. Ary niverina indray ireo fampilazana.
Tahaka ny teo aloha, afaka nahita ireo fampilazana tamin'ny hafatra indray i Anna, saingy tsy mety tafiditra ao amin'ny karajia voalaza. Tsy nahomby ny fiezahany nandefa ny hafany manokana ao amin'ny karajia. Ary tsy nisy famantarana fa mahafantatra ny fisian'ny olon-kafa mijery ny resak'izy ireo ireo mpandray anjara amin'ny karajia. Noho ny fangatahan'ny TJournal, nandrakitra lahatsary miaraka amin'ny porofo misy ireo hafatra tsy niriana mihitsy i Anna.
Avy amin'ny karajia Telegram antsoina hoe “SMM” (fanafohezana ny “Fitantanana ny media sosialy”) ireo hafatra farany vao haingana, ary nahitana anarana vitsivitsy (toa an'i Ilya Klishyn, Aleksey Abanin, ary Daniil Zubov), tsapan'i Anna taty aoriana fa mahalala ny resaka anatiny amin'ny media sosialin'ny ekipa matoandahatsoratry ny TV Rain izy. Nanamarika ihany koa izy fa mipoitra vetivety ao amin'ny pejy Twitter, Facebook, sy ny VKontakte an'ny TV Rain ny rohin'ny resaka resahina ao amin'ny karajia.
Raha nantonin'ny TJournal, dia niaiky ny mpanorina ny Telegram, Pavel Durov, fa fikatsoana amin'ny rindrambaiko iray no olana, saingy nihevitra izy fa mety nahazo ny findainy tamin'ny namany izay niasa teo aloha tao amin'ny TV Rain sy nanana fidirana tao amin'ny karajia i Anna. Nolavin'i Anna fa tsy mbola nanana namana niasa na nanana fifandraisana tamin'ny TV Rain izy.
Nilaza tamin'ny TJournal izy fa hatramin'ny nividianany ny finday, tsy mbola nanome izany tamin'ny olon-kafa izy ary ny kaontiny Telegrama no hany nidirany ao amin'ny finday.
Afaka matoky Ny Telegram ve ny mpiserasera?
Mirehareha ho manana fifandraisana voaaro ny Telegram, na izany aza, nanontany ny hamafin'ny fiarovan-kafatra (cryptographie) ireo manam-pahaizana momba ny fiarovana . Ankoatra ny “fiarovan-kafatra manokany” fa tsy miantehitra amin'ny vahaolana fanafenan-tsoratra efa vonona, misy ny olana fiankinan-dohan'ny fitaovana. Raha tsy izany, mampiasa alàlana mifototra amin'ny lahatsoratra ny Telegram, izay ahafahan'ireo mpiserasera mampiditra kaonty Telegram amin'ny finday vaovao amin'ny alalan'ny fampidirana fotsiny ny teny fanamarinana voaray tamin'ny hafatra an-tsoratra tao amin'ny smartphone. Azo atao ny fanamarinana indroa, saingy tsy ilaina.
Saingy tsy manazava tanteraka ny antony mahatonga an'i Gorbacheva, [izay voalaza fa tsy an'ny olona nifandray tamin'ny TV Rain ny findainy], nanomboka nahazo hafatra tampoka tao amin'ny hafany manokana ireo singa fantatra fa an'ny rafitry ny Telegram. Mampiseho ny zava-nitranga tamin'i Gorbacheva fa mety ratsy noho ireo tsikera noheverina teo aloha ny fitsipi-piarovana ao amin'ny Telegram.
Very hevitra i Anna, amin'ny fomba ahoana ary nahoana izy no afaka mahita hafatra avy amin'ny karajia izay tsy maha mpikambana azy akory. Nahazo valin-teny avy amin'ny sampana fanampian'ny Telegram ihany i Anna noho ireo fangatahana naverimberiny. Nilaza taminy izy ireo mba hivoaka mihitsy ao amin'ny resaka rehetra mandeha ao amin'ny fandefasan-kafatra. Saingy tsy nahomby izany fa mbola naharay hafatra hafahafa foana ao amin'ny fampihatra telegram i Anna.
Raha nanadihady lalina ny olana ny TJournal, hita fa fikatsoana mpahazo ny Telegram ny fiovana kaonty sy miditra amin'izany rehefa avy nampiasain'ny mpisera iray hafa: Mpisera maro no nitatitra fa efa tafiditra tamin'ny fifandraisana sy hafatra avy amin'ireo kaonty mavitrika teo aloha tao anatin'ny finday, rehefa avy nivoaka tamin'ny rindrambaiko ireo mpisera ireo. Mamafa ny kaonty vaovao napetraka tao amin'ny finday sy avy amin'ny fivarotan'ny Telegram ary very daholo ny lahatahirin'ilay mpiserasera rehetra, tsy nisy intsony ny fomba hafa hamahana ny olana ara-piarovana fiainana manokana.
Nilaza ny mpanorina, Pavel Durov, fa efa nofafan'ny Telegram ny “cache” misy ny tahirin'ny mpiserasera teo aloha raha tojo ity olana ity, saingy olan'ireo mpiserasera manokana kosa raha sendra talohan'ny naha lasa ofisialy ny fikatsoana. Mbola mahazo fampilazana ao amin'ny media sosialin'ny TV Rain hatrany i Anna, na dia efa niala tamin'ireo resaka rehetra mandeha ao amin'ny Telegram aza. Nilaza ny Telegram fa ny safidy tsara indrindra dia ny mamerina ny fandehan'ny finday tamin'ny nanamboaran'ny orinasa azy tany am-boalohany rehefa avy nivoaka tamin'ny kaontiny ny tompony teo aloha.
Ka inona no ataonao raha manomboka mitoraka hafatra tsy niriana na mampiseho fifandraisana hafahafa tampoka aminao ny Telegram? Nilaza i Durov fa ny vahaolana hany azo antoka dia ny mamono ny kaonty Telegramanao amin'ny alalan'ny fanokafana mivantana ity rohy ity ao amin'ny fandefasan-kafatra, izay hahatonga ny karajianao sy ny tahirinao rehetra hanjavona.
Nilaza ny Telegram fa “tsy natao ho ampiasaina amin'ny findain'ny olon-kafa” ny fandefasan-kafatra, izany no mahatonga ny fifangaroan'ireo lisi-pifandraisana taterin'ny mpiserasera sasany. Nolazain'ny sampam-panampian'ny Telegram mba “hampiasa ny kaontiny azy manokana ihany ao amin'ny findainy azy manokana ihany” ny mpiserasera iray, “noho ny fiankinan-dohan'ny fandefasan-kafatra amin'ny rindrambaiko. Saingy mijanona ho misitery ny hafatra avy amin'ny karajia hafahafa notaterin'i Anna. Ka mampanontany tena ny lazan'ny Telegrama amin'ny maha fampiharana fandefasan-kafatra azo antoka azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/13/84812/
 Nitatitra : https://tjournal.ru/30675-iz-za-baga-v-telegram-moskvichka-poluchila-vozmozhnost-nezametno-chitat-perepisku-redakcii-dozhdya
 lahatsary : https://youtu.be/k7lh7k_1VxU
 manam-pahaizana momba ny fiarovana: https://twitter.com/alexstamos/status/582226393481641984
 ity rohy ity : https://telegram.org/deactivate